एनआरएन अष्ट्रेलियाले पायो नयाँ अध्यक्ष - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एनआरएन अष्ट्रेलियाले पायो नयाँ अध्यक्ष
असनेपाल न्युज । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको शनिबार विभिन्न शहरमा सम्पन्न निर्वाचनले अागामी २ वर्षका लागी नयाँ नेत्रीत्व चयन गरेको छ । शनिबार साँझ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार मेलबर्न निवासी वर्तमान महासचिव टोनु घोतानेले २ हजार २ सय १८ मत ल्याएर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्रप्रताप शाहले घाेताने भन्दा मात्र ५ मत कम अर्थात २ हजार २ सय १३ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका अन्य प्रतिस्पर्धीहरु अभिमान सिंह बस्नेतको पक्षमा ५ सय ५६ मत र डा. महेश भण्डारीको पक्षमा २ सय ४५ मत खसेका थिए ।
यसैगरी निकटतम प्रतिस्पर्धी राजु मानन्धरलनइ ७० को मत अन्तरमा १ हजार २ सय ९९ मत प्र्राप्त गरी नारायण कोइरालाले अाफुलाइ महासचिवका रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी राजु मानन्धरले भने १ हजार ९ सय २९ मत प्र्राप्त गरेका थिए ।
देव बहादुर गुरुङले २ हजार ३ सय ३६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी विकास केसीलाइ पछि पारेर सचिव पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रतिस्पर्धी केसीले १ हजार ७ सय ९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसैगरी कोषाध्यक्ष पदमा २ हजार ५ मतका साथ अच्युत शर्मा थपलिया,युवा संयोजक पदमा २ हजार ७ सय ४८ मतका साथ धर्मराज अधिकारी,एनआरएन आईसीसी सदस्यमा २ हजार ५ सय ९८ मतका साथ जानकी पौडेल , २ हजार ४ सय ८ मतका साथ दिपक भट्टराई , २ हजार २ सय ९२ मतका साथ केदार रिजाल , २ हजार २ सय ९२ मतका साथ उषाकिरण बारिया पोखरेल , २ हजार २ सय ५९ मतका साथ मगोकुलप्रसाद घिमिरे र २ हजार १ सय ३१ मतका साथ राजकुमार थपलिया निर्वाचित भएका छन् ।
उपाध्यक्ष एवं राज्य संयोजक पदमा अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरेटोरीबाट ८१ मतका साथ राजनप्रसाद ढुंगेल, न्यूसाउथवेल्सबाट १ हजार ३ मतका साथ नन्द गुरुंग, नर्दन टेरेटोरी डार्विनबाट २ सय ५२ मतका साथ हरिराम रिजाल, साउथ अष्ट्रेलियाबाट ३ सय १६ मतका साथ अशोक केसी,भिक्टोरियाबाट ५ सय ४४ मतका साथ केशव कँडेल,वेष्टर्न अष्ट्रेलियाबाट ५ सय १७ मतका साथ दिपक शर्मा विजयी भएका छन् । तास्मानियाबाट विश्वेश्वर खतिवडा र क्वीन्सल्याण्डबाट सन्तोष कुँवर निर्विरोध चुनिएका छन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिएका भनिएका अनिल पोखरेल, डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, डिला खरेलका पक्षमा पनि केहि मत खसेका थिए । अायोगका अनुसार उनीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सिद्दीसकेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । जाडो माैसमका बेला भएको यस निर्वाचनमा कुल मतदाता मध्ये ६६.८७ प्रतिशतले मात्र भाग लिएका थिए ।
अस्ट्रेलियाले घटायो आप्रवासीको संख्या,यसवर्ष १ लाख ६३ हजारलाई मात्र प्रवेशको अनुमति
अस्ट्रेलिया । पछिल्लो समय आप्रवासीहरुप्रति कडा नीति लिएको अस्ट्रेलियाले यसवर्ष स्थायी अनुमतिको संख्या करिब […]